आरोपित नेतालाई बचाउनको निम्ती देउवाको दौडधूप हुँदै! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
आरोपित नेतालाई बचाउनको निम्ती देउवाको दौडधूप हुँदै!
काठमाडौं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि ‘पूर्वाग्रह’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उक्त घटनाको देउवाले राजनीतिक पूर्वाग्रह भनेर टिप्पणी मात्र गरेनन्, गत बिहीबार आफ्नै निवासमा पदाधिकारी बैठक बोलाएर अख्तियारको उक्त निर्णय बद्नियतपूर्ण भनेर ‘माइन्यूट’ नै गरे ।
नेपाली कांग्रेस इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । कांग्रेसका नेताहरुले अहिले पनि विधिको शासन र कानूनी राज्यको चर्को बहस गर्छन् । जब त्यो कुरा आफू प्रतिकूल हुन्छ, तब जस्तोसुकै अपराध गर्नेको पक्षमा पनि कांग्रेस उभिन तयार हुन्छ ।यो नेतृत्वको भ्रष्ट मानसिकताको उपज हो । विजय गच्छदार मात्र होइनन्, जिउँदै इँटाभट्टामा मानिस जलाएर मार्ने मोहम्मद अफताव आलमका पक्षमा पनि कांग्रेस यसैगरी उभिएको थियो । त्यति मात्र होइन, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का र जेपी गुप्तामाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा पनि कांग्रेसले पूर्वाग्रहीको चश्माबाट हेरेको थियो ।
कांग्रेसको पछिल्लो यस्तो निर्णय हेर्दा ऊ कानूनीराज र विधिको शासनमा विश्वास गर्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैनन् । यदि नेपाली कांग्रेस विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो भने, उसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको यो ऐतिहासिक निर्णयको स्वागत गर्नुपथ्र्यो ।कांग्रेसका उपसभापति गच्छदारको यस घटनामा संलग्नता छैन भने उसलाई अन्तिम न्याय दिने अदालत छ । अदालतको सम्मान गर्नु कानूनी राज्यको अवधारणा हो । अख्तियारले आरोप लगाउँदैमा कोही पनि अपराधी हुन सक्दैन । गच्छदारले आफ्नो कुरा अदालतसमक्ष राख्न सक्छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अरुमाथि कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने कांग्रेसको तर्क उचित होइन ।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु र कानूनी राज्य स्थापना गर्नु प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको पनि दायित्व हो । आफ्नो दायित्वबाट उम्किन एउटा ‘भ्रष्टाचारी’को पक्षमा सिंगो सदन अवरुद्ध गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।कांग्रेसको यही मानसिकताका कारण जनताले तिनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सजाय दिएको हो । ०४८ सालपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्नेमा कांग्रेस नै पहिलो पार्टी हो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कांग्रेस बिपी कोइरालाको विचार, सिद्धान्त र आचरणबाट विमुख भएपछि नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको हो । ०४८ सालदेखि अहिलेसम्मका नेता, कार्यकर्ताको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरु जेल जानुपर्ने अवस्था छ ।
चारपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको कार्यकाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको कार्यकाल हो । उनको कार्यकालमा भएका मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय केलाएर हेर्ने हो भने देश प्रतिपक्षविहीन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ३३ किलो सुन, वाइडबडी, न्यारोबडी प्रकरण, दरबारमार्गको नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरणदेखि लिएर एनसेल काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने देउवा उम्कने ठाउँ देखिँदैन ।त्यसैले होला अख्तियारको यो निर्णयपछि सबैभन्दा बढी देउवा आत्तिएका छन् । यदि देउवामा अलिकति नैतिकता छ भने उनले अख्तियारको यो कदमको स्वागत गर्दै अन्य काण्डको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षको धर्म र भूमिका पनि त्यही नै हो ।
Previous प्रहरी महानिरिक्षकमा ठाकुर ज्ञवाली नियुक्ति !
Next पढाईमा रुचीनै नभए बानी बसाल्नको निम्ती १३ जरुर सूत्र !